[Review] Top 6 quạt điều hòa Kangaroo tốt bán chạy nhất | Muasalebang - Muasalebang
Đang Đọc: [Review] Top 6 quạt điều hòa Kangaroo tốt bán chạy nhất | Muasalebang in Muasalebang
Ngezidingo ezikhulayo zabathengi, esikhundleni sokusebenzisa abalandeli abanemisebenzi evamile yokupholisa, manje abathengi bebelokhu befuna izinhlobo ezahlukene zabalandeli. I-air conditioner fan ube nomsebenzi wokupholisa osezingeni eliphezulu. I-Kangaroo air conditioner fan iwumugqa wabalandeli abapholisayo abangenakuzitshwa. Ngakho yimuphi umlandeli weKangaroo ongcono kakhulu futhi ophephe kakhulu? Landela isihloko esingezansi ukuze uthole lolo lwazi.
1 Ukwethulwa kohlobo lwabalandeli beKangaroo
2 Ingabe i-Kangaroo fan inhle futhi kufanelekile ukuyithenga?
2.1 2.1 Ifeni ye-kangaroo air conditioner inomklamo olula
2.2 2.2 Ifeni ye-kangaroo air conditioner inomthamo ohlukahlukene
2.3 2.3 Ifeni ye-kangaroo air conditioner inezici eziningi zesimanje
2.4 2.4 Ifeni yekhangaru inamandla okuhlanza umoya
2.5 2.5 Ifeni ye-kangaroo air conditioner enethangi elikhulu lamanzi
2.6 2.6 Ifeni ye-kangaroo air conditioner inemodi yesikhathi ehlakaniphile
3 Ukubuyekezwa kwabalandeli abangu-6 be-Kangaroo air conditioner abathengiswa kakhulu ngo-2021
3.1 3.1 I-Kangaroo air conditioner fan Kg50f79
3.2 3.2 I-kangaroo fan Kg50f58
3.3 3.3 I-Kangaroo air conditioner fan Kg50f20
3.4 3.4 I-Kangaroo Kg50f62 Ifeni Ye-Air Conditioner
3.5 3.5 I-kangaroo fan Kg50f64
3.6 3.6 Ifeni Ye-Kangaroo Air Conditioner Kg50f18
Ukwethulwa kohlobo lwabalandeli beKangaroo
I-Kangaroo iwuhlobo oluhlonishwayo lwaseVietnam ogama layo eliphelele yi-Viet Australia Electrical and Refrigeration Joint Stock Company. I-corporation yasungulwa ngo-2003 eminyakeni engaba ngu-20 yokusungulwa nokuthuthukiswa, i-Kangaroo ishiye impumelelo eminingi embonini kagesi nesiqandisi ngokujwayelekile kodwa ezinhliziyweni zabo bonke abathengi baseVietnam ikakhulukazi.
I-Kangaroo fan brand
E-Vietnam, i-Kangaroo iyibhizinisi elihamba phambili emkhakheni wezinsizakalo zezempilo kanye nokuphila kalula ngobuchwepheshe besimanje obufana nezinto zokuhlanza amanzi, izinto zikagesi zasekhishini, futhi kubaluleke kakhulu, okuhlanganisa nabalandeli be-Kangaroo air conditioner eyethulwa emakethe muva nje.
Ulayini womkhiqizo wabalandeli beKangaroo awudumile nje kuphela endaweni yaseVietnam kodwa futhi udumile emazweni afana ne-Indonesia, iLaos, .. Ngobuchwepheshe besimanje nobuthuthukile, i-Kangaroo air conditioner fan iya ngokuya ithandwa ngabantu, ithenjwa ngabathengi basekhaya nabangaphandle.
Ingabe i-Kangaroo fan inhle futhi kufanelekile ukuyithenga?
Kunezinhlobo eziningi ezahlukene zama-air conditioner emakethe namuhla. Ngakho kulowo nalowo I-Kangaroo air conditioner fan Yiziphi izinzuzo amakhasimende abelokhu ezithemba ukukhetha kanjalo? Ake sibone izizathu zempumelelo yabalandeli be-Kangaroo air conditioner:
2.1 Ifeni ye-kangaroo air conditioner inomklamo olula
Ama-air conditioner e-kangaroo wonke anemiklamo ehlangene enemibala emihle newubukhazikhazi. Ngakho-ke, fan ye-Kangaroo akuyona nje inketho yemindeni kodwa futhi namahhovisi, izindawo zokudlela, njll., futhi ukhethe lo mugqa wabalandeli be-air conditioner. Abalandeli be-kangaroo bavame ukuba namasondo phansi, alungele kakhulu ukuhambisa ifeni ezindaweni ezahlukene endlini yakho.
2.2 Ifeni ye-kangaroo air conditioner inomthamo ohlukahlukene
Abalandeli be-kangaroo air conditioner banamandla amaningi ahlukene ukuze abathengi bazikhethele indawo yabo. Ngezikhala zamakamelo kusuka ku-15 kuya ku-20 square metres, ungakhetha fan ye-Kangaroo engu-55W, futhi kusukela ku-20 kuya ku-30 ​​square metres, ungakhetha kusuka ku-110 kuya ku-170W ukupholisa igumbi ngempumelelo kakhulu.
2.3 Ifeni ye-kangaroo air conditioner inezici eziningi zesimanje
I-Kangaroo air conditioner fan inezivinini zomoya ezi-3 ezihlukene njengomoya ovamile. umoya opholile kanye nomoya olalayo. Ngakho kuye ngesikhathi nezidingo ezahlukene, abathengi bangakhetha isivinini somoya esifanelana nezidingo zabo. Ngokuhambisana nemodi yokupholisa enezinhlangothi eziningi, ama-fan blade angakwazi ukusunduza ukugeleza komoya kanye ne-louver ukuze kukhuliswe ngokushesha umthamo wokupholisa wegumbi ngalinye.
Bhekisela: [Review] Abalandeli abangu-6 abathengisa kakhulu be-Midea air conditioner namuhla
2.4 Ifeni yekhangaru inamandla okuhlanza umoya
I-Kangaroo air conditioner fan Njengoba uphethe ipuleti lokupholisa le-oki, lihlala isikhathi eside futhi linamandla okupholisa ngempumelelo kanye nokuhlunga ukungcola namagciwane asemoyeni. Siza indawo ezungezile yomsebenzisi ukuthi ihlanzeke futhi idale umuzwa wokunethezeka nokuphumula kumsebenzisi.
I-Kangaroo air conditioner fan inamandla okuhlanza umoya
2.5 Ifeni ye-kangaroo air conditioner enethangi elikhulu lamanzi
Njengoba inomthamo omkhulu wethangi lamanzi, i-Kangaroo air conditioner fan ingaphola isikhathi eside ngaphandle kokukhathazeka ngokugcwalisa amanzi kaningi. Kanye nesikali esibonakalayo sezinga lamanzi, singasiza abasebenzisi ukuqapha inani elisele lamanzi ethangini futhi bawagcwalise ngokushesha lapho amanzi ephela.
2.6 Ifeni ye-kangaroo air conditioner inemodi yesikhathi ehlakaniphile
Ngesici sesikhathi esihlakaniphile nesifanele sefeni ye-Kangaroo air conditioner, abasebenzisi akudingeki bavuke phakathi nobusuku ukuze bavale ifeni ngoba kubanda kakhulu. Siza abasebenzisi balale bengaphazamiseki futhi bonge ugesi uma besebenzisa amafeni e-Kangaroo air conditioner.
Ukubuyekezwa kwabalandeli abangu-6 be-Kangaroo air conditioner abathengiswa kakhulu ngo-2021
Ngezinzuzo eziningi ze I-Kangaroo air conditioner fan Ngakho-ke manje lona umugqa womkhiqizo othenjwayo futhi okhethwa ngabathengi abaningi. Ake sibheke amagama ayi-6 abalandeli beKangaroo abathengiswa kakhulu ngo-2021:
3.1 I-Kangaroo air conditioner fan Kg50f79
I-Kangaroo KG50F79 air conditioner fan inomklamo wesimanjemanje futhi kanokusho, ngakho ifanele imiklamo eminingi yawo wonke umndeni. Ngezici eziningi zesimanje nezisebenziseka kalula kanye nekhono lokuhambisa umkhiqizo kalula ezindaweni eziningi ezihlukene endaweni efanayo, lona umkhiqizo odume kakhulu emakethe namuhla.
Ifeni ye-Kangaroo Kg50f59 air conditioner ine-remote control evumela abasebenzisi ukuthi benze imisebenzi yabalandeli ngaphandle kokuxhumana eduze nendawo lapho ifeni ye-Kangaroo air conditioner ikhona. Ngesikhathi esifanayo, le fan ye-air conditioner ye-Kangaroo inesikrini esibonisa ngokucacile ulwazi mayelana nesivinini somoya kanye nemisebenzi yesikhathi, imodi yokuzungezisa, … ukuze abasebenzisi bakwazi ukubona imisebenzi futhi balungise kalula.
I-Kangaroo Kg50f79 air conditioner fan iklanywe ngezivinini zomoya ezi-3 ezihlukene ukuze ihlangabezane nezidingo zokupholisa ezindaweni ezihlukene kanye nasezimweni zezulu ezihlukene. Ngomthamo wabalandeli ongu-150W kanye nokugeleza komoya ngehora okungu-5500m3, ifeni ye-air conditioner ye-Kangaroo Kg50f79 ifanelekela izikhala ezinkulu ezifika ku-40m2.
Intengo yesithenjwa: 5,500,000 VND.
Buka Okuningi: [Review] Iluphi uhlobo lwe-Boss air conditioner oluhamba phambili futhi luphephe kakhulu ngo-2021
3.2 I-kangaroo fan Kg50f58
I-Kangaroo Kg50f58 air conditioner fan inomklamo kanokusho futhi ohlangene ofanele imizi enezikhala ezincane. Lolu chungechunge lwabalandeli luphethe izibani ze-LED ezibonisa imingcele yesimanje ukusiza abasebenzisi babone kalula izindlela ezenziwa ngumlandeli. Kanye nesilawuli kude, abasebenzisi bangashintsha kalula imisebenzi ye-Kangaroo Kg50f58 air conditioner fan ngendlela engcono kakhulu.
I-Kangaroo Kg50f58 air conditioner fan isethwe ngezindlela ezi-3 ezihlukene zomoya: imodi yemvelo, evamile kanye nemodi yokulala ukuze isize ukuhlangabezana nezimo ezihlukene zabasebenzisi. Ngaphezu kwalokho, ifeni inamandla okupholisa ebangeni elibanzi ukuze isize ukugeleza komoya kusabalale ngokushesha nangokubanzi endaweni yonke.
Ngokukhethekile, Umlandeli wekangaroo Lo mugqa unamandla okusetha isikhathi sokuvala ngokuzenzakalelayo ifeni kalula. Siza abasebenzisi babe nokulala okujulile ngaphandle kokuphazamiseka lapho bevuka phakathi nobusuku ukuze bavale ifeni. Ngesikhathi esifanayo, ifeni ye-air conditioner ye-Kangaroo Kg50f58 nayo inesici sesaziso lapho izinga lamanzi ethangini seliphelile ukuze kuqinisekiswe ukuthi amanzi ahlala enikezwe ngokugcwele ukuze aphole futhi adale umswakama ongcono kakhulu emoyeni.
Ufuna ulwazi olwengeziwe: [Review] Abalandeli abangu-6 abahamba phambili bezinga eliphezulu le-Sunhouse air conditioner ngo-2021
3.3 I-Kangaroo air conditioner fan Kg50f20
Uchungechunge lwabalandeli be-Kangaroo Kg50f20 air conditioner lunamandla okupholisa ngokushesha ukuze abasebenzisi bakwazi ukususa ngokushesha umoya ominyene noshisayo ezinsukwini zasehlobo. Kanye nesici somswakama, isikhumba asomi futhi asinakho ukungahambi kahle njengama-air conditioners avamile. Ngaphezu kwalokho, ifeni ye-Kangaroo Kg50f20 air conditioner nayo inesibali sikhathi esisuka ehoreni elingu-1, amahora angu-2 ukuya kwayi-8, ngakho ingakwazi ukuhlangabezana nezidingo ezahlukene zabasebenzisi.
I-Kangaroo Kg50f20 air conditioner fan iphinde ibe nesilawuli kude esilula kakhulu esenza imisebenzi yokulawula ibe lula. Ngezindlela ezi-3 zomoya ojwayelekile, wemvelo kanye nobuthongo onamazinga omoya ahlukene, abasebenzisi bangakhetha ngokuya ngezimo ezahlukahlukene.
Ngaphezu kwalokho, i-Kangaroo air conditioner fan nayo inamasondo phansi ukuze kube lula futhi kube lula ukusuka kwenye indawo ukuya kwenye.
Intengo yesithenjwa: 4,690,000 VND.
3.4 I-Kangaroo Kg50f62 Ifeni Ye-Air Conditioner
Ifeni ye-air conditioner ye-Kangaroo Kg50f62 inesici esihlanganisiwe phakathi kokupholisa nokuswamisa ngempumelelo endaweni yokuhlala ngaphandle kokusebenzisa amandla amaningi. Ngezivinini zabalandeli ezingu-3 ezifana neziphansi, eziphakathi naphezulu ukusiza ukudala umoya opholile nenethezekile kubasebenzisi.
Ifeni ye-Kangaroo Kg50f62 ye-air conditioner inamandla afinyelela ku-100W kanye nokugeleza komoya ngehora okungu-3700m3, ngakho izopholisa ngokushesha izindawo ezinkulu ezinendawo efinyelela ku-30m2. Kanye nemodi yokuswakama esebenzisa isitimu ukuze kwehliswe izinga lokushisa emoyeni, isikhumba somsebenzisi asiphelelwa ngamanzi njengalapho usebenzisa isipholile.
Isici esikhethekile se-Kangaroo Kg50f62 air conditioner fan ukuthi ayidali umehluko omkhulu phakathi kwamazinga okushisa angaphakathi nangaphandle, ngakho-ke uma usebenzisa le fan ye-Kangaroo air conditioner, ngeke udinge ukukhathazeka ngezingane eziphethwe izifo zokuphefumula. ukuthungatha.
Intengo yesithenjwa: 3,500,000 VND.
Ungase ube nentshisekelo: Abalandeli abangu-8 abadayise kakhulu bePanasonic air conditioner ngo-2021
3.5 I-kangaroo fan Kg50f64
I-Kangaroo Kg50f64 air conditioner fan yakhelwe ngomsebenzi we-ion owengeziwe okwazi ukuhlanza umoya endaweni lapho umshini utholakala khona. Isiza umoya ukuthi uphume upholile, usha futhi ulungele ikakhulukazi impilo yezingane kanye nabantu abadala. Ngezivinini zomoya ezi-3 ezihlukene, eziphansi, eziphakathi nendawo neziphezulu, ingahlangabezana nezidingo zokupholisa zabasebenzisi abahlukene.
I-Kangaroo Kg50f64 air conditioner fan inomthamo ongu-90W kanye nokugeleza komoya ngehora okungu-6500m3, ngakho ifanele izindawo ezinendawo efinyelela ku-25m2. Imodi efanayo ye-steam humidification yehlisa izinga lokushisa lomoya, ngakho-ke ayibangeli isikhumba esomile kanye nokuphelelwa amandla kwamanzi kubasebenzisi njengalapho besebenzisa ama-air conditioner avamile.
Ikakhulukazi, ngomklamo omuhle futhi wesimanje, kufanelekile ezindaweni eziningi ukusuka emindenini kuya emahhovisi. Kanye ne-fan base ifakwe amasondo, ngakho-ke kulula ukuthuthela ezindaweni ezahlukene kalula futhi kalula.
Intengo yesithenjwa: 4,000,000 VND.
3.6 Ifeni Ye-Kangaroo Air Conditioner Kg50f18
Uchungechunge lwe-air conditioner ye-Kangaroo Kg50f18 lunesici sokupholisa esisebenza ngempumelelo uma ifika namabhokisi angu-2 eqhwa elomile. Ngesikhathi esifanayo, amandla okusebenza ale fan ye-air conditioner afinyelela ku-130W, ngakho-ke ingapholisa igumbi elinendawo efinyelela ku-35m2 ngokushesha. Umkhiqizo uklanywe uma usebenza, ukhipha kuphela umsindo ongaba ngu-50 kuya ku-65dB, ngakho-ke akukho kukhathazeka ngokuthi kuzothinta ukulala komsebenzisi.
Ifeni ye-air conditioner ye-Kangaroo Kg50f18 inesivikelo sothuli ngaphandle ukuze ivikeleke ngephedi yokupholisa ngaphakathi, ngakho idala isimo sezulu esipholile nesisha kakhulu somsebenzisi.
Intengo yokuthengisa yesithenjwa: 6,500,000 VND.
I-Kangaroo air conditioner fan kanye nezici ezivelele kuzosiza abasebenzisi ukuxosha ukushisa kwezinsuku zasehlobo. Ngemigqa yabalandeli abangu-6 abathengiswa kakhulu ngo-2021. Ngethemba ukuthi wonke umuntu uzoba nezinkomba eziwusizo kuleli hlobo.
Ufuna ulwazi olwengeziwe: [Review] Abalandeli abangu-6 abathengisa kakhulu be-Daikio air conditioner namuhla
Xem Thêm Điều hòa Casper báo lỗi P3 – P4 | Muasalebang